Ahoana ny fomba fampidinana horonantsary YouTube amin'ny Softorino YouTube Converter | Vaovao IPhone
Betsaka ny fomba fampidinana horonantsary YouTube hahafahana mijery azy ireo amin'ny fotoana rehetra tadiavintsika nefa tsy manana fifandraisana Internet na mandany ny sarany fisaka kely tsy ilaina. Fa noho ny Softorino YouTube Converter dia ho mora kokoa noho ny hatramin'izay ity fomba ity, ao anatin'izany ny mety hamindrana ireo horonan-tsary na audio alaina amin'ny iPhone, iPad na iPod Touch anao amin'ny tsindry tokana, ary hahafahana mamerina azy amin'ny rindranasan'ny iOS teratany. Atorinay anao ny fomba fiasan'ity rindranasa vaovao ity, izay maimaim-poana ihany koa ary azo sintonina izao.
Araka ny hitanao amin'ny horonan-tsary, dia tsotra be ny fomba fanao. Mila mivezivezy amin'ny horonan-tsary tianao hofidina fotsiny ianao, mandika ny adiresy ao amin'ny clipboard anao ary ho hitan'ny Softorino YouTube Converter ho azy ilay horonan-tsary. Azonao atao ny misafidy ny kalitao tianao hampidinana azy, na dia 4K aza (raha mbola misy amin'io kalitao io ilay horonantsary) na safidio fotsiny ilay audio sao dia ny fihainoana ny mozika fotsiny no tadiavinao. Ny fampiharana mamela anao misintona azy amin'ny Mac na mamindra azy amin'ny tsindry tokana amin'ny iPhone, iPad na iPod Touch mifandray amin'ny USB amin'ny solosaina. Raha misafidy ny hampidina azy ireo amin'ny fitaovana iOS ianao dia ho afaka hilalao azy ireo amin'ny fampiharana Videos (raha horonan-tsary izany) na Music (raha ny feo fotsiny no nakarinao), ka araraoty ny tombony ny fampiasana ny rindranasa zanatany.
Softorino YouTube Converter dia fampiharana maimaim-poana tanteraka, tsy misy afa-tsy amin'ny Mac ihany ary izany dia azo sintonina avy amin'ny pejiny ofisialy, izay azonao idirana Ity rohy ity. Ity no kinova voalohany ary efa manana ny fanavaozana ny ho avy izy ireo izay hampiditra ny fahafaha mamindra ireo horonan-tsary amin'ny iPhone na iPad amin'ny alàlan'ny WiFi, nefa tsy mila mampifandray azy ireo amin'ny solosainao amin'ny alàlan'ny tariby USB.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ahoana ny fomba fampidinana horonantsary YouTube amin'ny Softorino YouTube Converter
Apple Store Hong Kong manampy rihana fahatelo
Apple nandefa beta ampahibemaso voalohany an'ny iOS 9.2.1